Roy Bennett: News & Videos about Roy Bennett - CNN.com
Controversial Zimbabwe politician Roy Bennett, a longtime opponent of President Robert Mugabe, was acquitted Monday of all charges, including terrorism, his lawyer said.
Star witness in Zimbabwe terror trial threatened with impeachmentupdated: Tue Jan 12 2010 11:45:00
The trial of controversial Zimbabwean politician Roy Bennett took a new twist Tuesday when prosecutors told the judge they wanted to impeach their star witness.
Mugabe opponent Bennett's trial adjournedupdated: Mon Nov 09 2009 14:31:00
The trial of key Zimbabwe opposition figure Roy Bennett was adjourned in the Harare High Court Monday so the judge can deliberate the admissibility of evidence allegedly gathered through torture.
Zimbabwe cancels visit by U.N. torture investigatorupdated: Thu Oct 29 2009 03:58:00
A U.N. special investigator on torture said he was denied entry into Zimbabwe on Wednesday for an eight-day trip to look into alleged attacks against opposition party members.
Opposition official's trial on hold in Zimbabweupdated: Sat Oct 17 2009 12:29:00
A Zimbabwean court postponed the trial of key opposition figure Roy Bennett on Saturday to allow his lawyers time to prepare their case.
Zimbabwe power-sharing crisisupdated: Fri Oct 16 2009 15:35:00
To register its displeasure, Morgan Tsvangirai's party will boycott cabinet meetings. CNN's Nkepile Mabuse reports.
Lawyer: Zimbabwe opposition politician Bennett freed on bailupdated: Fri Oct 16 2009 15:35:00
Roy Bennett -- a leader in the Zimbabwean opposition Movement for Democratic Change who was sent back to jail earlier this week to await trial -- has been released on bail, his lawyer said Friday.
Zimbabwe judge orders opposition politician back to jailupdated: Thu Oct 15 2009 01:51:00
Zimbabwe: Long road to recoveryupdated: Thu Sep 24 2009 10:02:00
Zimbabwe appears to be showing signs of recovery, but it is starting back from a very low base.
Opposition politician released in Zimbabweupdated: Thu Mar 12 2009 12:53:00
A top opposition politician in Zimbabwe was released on bail Thursday after spending almost a month in prison.
Zimbabwe's Supreme Court orders politician's releaseupdated: Wed Mar 11 2009 12:15:00
Zimbabwe's Supreme Court Wednesday ordered that a top opposition politician be released from prison on bail, the opposition party said.
Official who freed Zimbabwe opposition politician arrestedupdated: Fri Mar 06 2009 11:59:00
Zimbabwe police arrested on Friday a magistrate who ordered the release of a senior opposition politician granted bail by the country's High Court, a lawyer said.
Zimbabwe court allows appeal on opposition official's bailupdated: Thu Mar 05 2009 14:46:00
A Zimbabwe Supreme Court judge ruled Thursday that the state can further appeal a decision that would release a top opposition politician on bail.
Zimbabwe judge to rule in opposition official caseupdated: Wed Mar 04 2009 21:10:00
A Zimbabwe Supreme Court judge will decide Thursday whether the state should be allowed to further appeal a decision that would let a top opposition politician out on bail.
Zimbabwe's disunity governmentupdated: Wed Mar 04 2009 21:10:00
Zimbabwe's unity government gets off to a rough start. CNN's Nkepile Mabuse reports.
Attorney: Despite ruling, release unlikely for Mugabe opponentupdated: Tue Mar 03 2009 13:33:00
Zimbabwe's High Court on Tuesday upheld the release of a top opposition politician on bail, but the state attorney vowed to take the case all the way to the Supreme Court.
Zimbabwe court orders jailed politician freedupdated: Tue Feb 24 2009 10:44:00
A Zimbabwe court has ordered the release on bail of a top opposition politician, but the country's attorney general immediately asked for seven days to decide whether it would appeal.
Jailed politician refuses Zimbabwe amnesty dealupdated: Tue Feb 24 2009 08:59:00
Officials in Zimbabwe President Robert Mugabe's ruling party have offered to release imprisoned opposition leaders in exchange for a promise of amnesty covering the party's nearly 30-year rule, one jailed politician's wife said Wednesday.
Arrested Zimbabwe activist's hearing delayedupdated: Mon Feb 16 2009 12:03:00
Police in Zimbabwe Monday failed to bring to court an opposition activist who was scheduled to become a government minister on Friday but was arrested instead.
Zimbabwe accuses new minister of terrorismupdated: Sun Feb 15 2009 08:18:00
Roy Bennett, the former Zimbabwean opposition activist who was arrested Friday shortly before he was due to become a Cabinet minister, has been charged with conspiracy to commit banditry, sabotage and terrorism, his lawyer told CNN.
Zimbabwe arrests new government ministerupdated: Fri Feb 13 2009 23:04:00
CNN denied permission to cover elections in Zimbabweupdated: Wed Mar 26 2008 10:14:00
CNN has been denied permission to cover this week's parliamentary and presidential elections in Zimbabwe, an official at the Zimbabwean Ministry of Information and Publicity said Tuesday.